Wariysiga Kornel Caare Maxaa kaaga baxay? – hogaanka.org
Dhibaatada dhulboodka ee ka jirta Somaliland waxaa lagu qiyaasi karaa mid xadhka goosatey kol hadii sheekh Baladkii Galbeedka Somalilandba Ka hadlisay Saameynteedu
Makulatay Caare in uu Ciidamada Qaran Somaliland ku Soo noqondoono?
Maxay ka Dhigantay in aad darajo aanad gaadhin Sheegato sharciga ciidamada?
Maxayse ka dhigantey in aad Mushahaarkii ciidamadii aad maamulileysay dhacdo?
Calamku Sidee uu u arkaa qof isku dayey in uu inqilaabo oo uu xoog ku qabsado dawlad domuraadiya oo codka dadkeeda lagu soo doortey?
Sidan qabo Caare wuxuu isku furay markhaati in uu ku kacay khiyaamo qaran,dhac iyo dhilal uu geestey intuu duurka ku jirey waxaana aynu eegi doonaa mustaqbalkiisa dambe hadii Allah(swt) ina gaadhsiiyo. Inkasta oo heshiis uu la galey dawlada Somaliland oo arintaasi la dhameeyey hada balse tii uu ka galey umada reer Somaliland guud iyo gaar ahaan dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartey dhibaatooyinkii uu abuuray waxa uu u baahan yahay in uu cafis weydiisto Allah na u toobad keeno taasina waa iga talo.
Dhibaatada dhulboodka ee ka jirta Somaliland waxaa lagu qiyaasi karaa mid xadhka goosatey kol hadii sheekh Baladkii Galbeedka Somalilandba Ka hadlisay Saameynteedu Previous
COVID-19: MEPs call for measures to close the digital gap in education — The European Sting – Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology – europeansting.com Next